Soo saaraha daawo ee APICMO ee dhexdhexaadinta CMO / CDMO
Waxyaabaha yar-yar & Wax-soo-saarka Bulshada
Adeegga APICMO wuxuu u dhexeeyaa milligram si loo helo tayada wax soo saarka badan
Tayada adeegga APICMO
waxaa naga go'an inaan helno tayada sare iyo shuruudaha wax soo saarka cGMP ee alaabooyinka si loo hubiyo in adeegyada iyo alaabada ay ka soo baxaan heerarka tayada ugu sareysa.
APICMO waa shirkad daawo oo soo saarta qaybaha muhiimka ah ee daawooyinka cusub. Waxay diiradda saareysaa bixinta nidaam dhammaystiran ee adeegga synthetic iyo adeegga loo habeeyay ee cilmi baarista daroogada iyo hay'adaha horumarinta iyo shirkadaha daawooyinka.
KU SOO DHAWAADA APICMO BIOCHEMICAL INC.
APICMO waxay leedahay koox xooggan R & D iyo saynisyahano khibrad leh - Dr. JACK. Waxaan leenahay warshad wax soo saarkeedu weyn iyo ganacsiga horumarinta ganacsiga. Xubnaha APICMO ee xubnaha kooxda badanaa waxay ka yimaadeen wadamada horumaray sida Maraykanka, Yurub iyo Japan. In ka badan sannadka 10 waayo-aragnimada warshadaha ee shirkadaha dawooyinka badan leh. Kadib in ka badan toban sano oo ah isku-dhafka suuqyada, APICMO waxay leedahay saldhig ballaaran oo iskaashiga ah ee warshadaha dhexdhexaadinta daawooyinka.
WAXYAALO KU SAABSAN US
APICMO waxay bixisaa adeegyadda la xidhiidha oo ay hoos u dhigeen sharciyadayada adag ee ilaalinta caqliga (IP), si loo hubiyo in mashaariicda lagu xalliyo xaalad qarsoodi ah.
Sannadihii la soo dhaafey, APICMO waxay bixisay adeegga qalabixinta iyo adeegga wax soo saarka. Adeeggayagu wuxuu u dhexeeyaa dufcadda yaryar ee milligram illaa tan oo ah adeegga wax soo saarka ee ballaadhan.
APICMO for Discovery Drug waa xal baaritaan ah oo ku salaysan daroogada, taas oo lafaguraysa aqoonta cilmiga iyo xogta si ay u muujiso xidhiidhada aan la garanayn oo qarsoon oo gacan ka geysan kara kordhinta suurtagalka ah ee cilmi-baarista.
Kooxdayada horumarinta kiimikada, waxay ka kooban tahay in ka badan Xeelo 50 ee Shiinaha, taas oo ka sarreysa ka filan mashaariicda ugu adag, waxay ka shaqeeyaan shaybaarada gobolka ee casriga ah ee qalabeeyay qalabka ugu dambeeya iyo qalabka falanqaynta.
Anagu waxaan ku kalsoonahay shirkadaha hoggaamiya aduunka
2016. AIMS BY LABORATORYARADA
2018. SUUQA SHAQADA
Saacadaha adeegga: laga bilaabo milligram ilaa boqolaal kiilogaraam. Waxaan leenahay koox ka kooban xubnaha 10, kuwaas oo maamulaya suuq guud, baaritaan ku sameeynaya qaybaha alaabooyinka kala duwan iyo sidoo kale alaab-celiyeyaal Shiinuhu ah, sheyada wax soo saarka, iwm
NEWS & wakaaladaha
06 / 05 / 20190 jecel yahay
08 / 30 / 20180 jecel yahay
08 / 28 / 20180 jecel yahay
08 / 18 / 20180 jecel yahay
07 / 19 / 20181 Comment0 jecel yahay
Marry Iskaashatada Suuq-galka & Xayeysiinta
07 / 18 / 20180 Comment0 jecel yahay
Zhaosen Zeng Ph.D. manhajka qoraalka
07 / 18 / 20181 Comment0 jecel yahay
Yonghong Liang Ph.D. Manhajka Vitae
Guulaystaha abaalmarinta shahaadada ugu fiican
Aaminaada iyo xishoodka.